RULES AND REGULATION | Myanmar Architect Council (MAC)
RA,LA,SLA & AA List
YCDC Building Rules & Regulation, LS Duties
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ နှင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရ အင်ဂျင်နီယာ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်စည်းကမ်းများ READ MORE:
2014 YCDC Rules & Regulation
မာတိကာ အခန်း(၁) အမည်နှင့် အဓိပ္ပါယ်ဖော်ပြချက် အခန်း(၂) အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်း၊ ခွင့်ပြုခြင်း အခန်း(၃) လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း အခန်း(၄) ကော်မတီပိုင် မသင့်သည့် အဆောက်အအုံများ အခန်း(၅) လူနေထိုင်ရန် မသင့်သည့် အဆောက်အအုံများ အခန်း(၆) ကျူးကျော်ခွန် READ MORE:
2013 YCDC Law
မာတိကာ အခန်း(၁) အမည်နှင့် အဓိပ္ပါယ်ဖော်ပြချက် အခန်း(၂) ဖွဲ့စည်းခြင်း အခန်း(၃) ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ အခန်း(၄) လုပ်ငန်းကော်မတီနှင့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း အခန်း(၅)မြို့ပြနှင့်အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်းနှင့် မြေများစီမံခန့်ခွဲခြင်း အခန်း(၆) အဆောက်အအုံများဆောက်လုပ်ခြင်း ၊ ရေမြောင်းများနှင့်လမ်းများဖောက်လုပ်ခြင်း အခန်း(၇) READ MORE:
မာတိကာ အခန်း(၁) အမည်နှင့် အဓိပ္ပါယ်ဖော်ပြချက် အခန်း(၂) မြန်မာနိုင်ငံ ဗိသုကာကောင်စီဖွဲ့စည်းခြင်း အခန်း(၃) ကောင်စီဝင်များ၏ အရည်အချင်း၊တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ အခန်း(၄) လုပ်ငန်းကော်မတီနှင့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း အခန်း(၅) အစည်းအဝေးများကျင်းပခြင်း အခန်း(၆) ရုံးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း READ MORE:
Architect Council Law
မာတိကာ အခန်း (၁)အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက် အခန်း (၂)ရည်ရွယ်ချက်များ အခန်း (၃)မြန်မာနိုင်ငံဗိသုကာကောင်စီဖွဲ့စည်းခြင်း အခန်း (၄)ကောင်စီ၏တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ အခန်း (၅)ကောင်စီဝင်အဖြစ်မှ ရပ်စဲခြင်းအခန်း အခန်း (၆)အစည်းအဝေးများကျင်းပခြင်း အခန်း (၇)ဘဏ္ဍာရေး အခန်း (၈)ကျွမ်းကျင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် လျှောက်ထားခြင်းနှင့် READ MORE:
Heritage Design Workshop
Myanmar Architect Councilဒုတိယ အကြိမ်မြာက် နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနား
Myanmar Architect Council ပထမ အကြိမ်မြာက် နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနား
Invitation of Design donation for Flood Area in Myanmar
Yangon Transformation inatime of Transition. City wide strategies for Upgrading
ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ မြို့မဈေးသစ်အတွက် ဗိသုကာဒီဇိုင်းပြိုင်ပွဲ ပဏာမ အဆင့် ရွေးချယ်ခံရသော ဆန်ခါတင် (၃)ဦးစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း
MAC Foresight Report
မြန်မာနိုင်ငံဗိသုကာကောင်စီကို တာဝန်ခံဝန်ကြီးဌာနဖြစ်သော ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ၂၀၁၅ ခုနှစ် မတ်လ (၃၁)ရက်နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့သည်။ ကောင်စီ၏ သက်တမ်းမှာ (၄)နှစ်ဖြစ်သည်။
Connect with The MAC :
Myanmar Architect Council
228-234, Bogyoke Aung San Road, Yangon, Myanmar.
Ph : 09 782 120 543 / 09 265 465 884
© 2015-2022 MAC (Myanmar Architect Council). All rights reserved.